Ciidanka Ahlu-Sunna oo la wareegey Amniga guud ee Dhuusamareeb - Awdinle Online
Ciidanka Ahlu-Sunna oo la wareegey Amniga guud ee Dhuusamareeb
October 24, 2019 (AO) – Warar sugan oo hadda aan ka helney Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in Ciidamo ka tirsan Ahlu-sunna ay la wareegeen gacan ku heynta Xarunta Degmada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud.
Wariyeyaal ku sugan Dhuusamareeb ayaa soo sheegaya in Ciidanka Ahlu-sunna ay gebi ahaan la wareegeen gacan ku heynta Degmada, isla markaana haatan ay ku sugan yihiin gudaha.
Sidoo kale Xarunta lala wareegay ayaa waxaa la qorsheynayay inay la wareegaan Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya ee halkaas ku sugan ee loo yaqaano bac-kasii.
Talabadaan ay qaadeen Ciidanka Ahlu-sunna ayaa kusoo beegmeysa, iyadoo Caawa Ciidamo ka tirsan ay rasaas ku fureen Xarunta Inji oo ay degan yihiin Madaxda Sare ee Ahlu-sunna Waljameeca, isla markaana uu ku sugnaa xiligaas Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan.
Weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Saraakiisha Ciidanka dowladda Federaalka eek u sugan Dhuusamareeb.
Previous articleIsrasaaseyn laga maqley gudaha magaaladda Dhuusamareeb ee Gal-mudug
Next articleDhageyso :-Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay Oo Loo Gudbiyay Eedeymo Loo Heesto Taliye Saadaq John